Iwe Ucharasa Kushambadzira Kwako Jobho kune Robhoti? | Martech Zone
Iyi ndeimwe yemaposita ayo iwe snicker pa… uye wozoenda unotora pfuti yebourbon yekukanganwa. Pakutanga kuona, izvi zvinoita kunge mubvunzo usina musoro. Sei pasirese iwe yaunogona kutsiva maneja wekushambadzira? Izvo zvinoda kugona kudzidza maitiro evatengi zvakanyatso, kuongorora akaomarara data uye mafambiro zvakaringana, uye kufunga zvinehunyanzvi kuti uwane mhinduro dzinoshanda.
Mubvunzo unoda kuti tikurukure kuti ndeapi mabasa atinonyatsoita sevashambadziri zuva nezuva maringe neizvo vatengesi vanofanirwa kunge vachiita zuva nezuva. Vazhinji vashambadzi vari kufambisa data kubva kuhurongwa kuenda kune system, kuvandudza uye kuongorora mishumo kuti vape humbowo hwekuti zviedzo zvavo zvaive zvechokwadi, zvisina basa, kana zvaigona kugadziriswa, uyezve vachishandisa kugona kwavo kutyaira mhedzisiro yebhizinesi.
Kutyaira mhedzisiro yebhizinesi nehunyanzvi kunoratidzika kunge hwaro hwevashambadzi vese, kunyangwe vashambadzi vazhinji vasingangowana nguva yakakwana yekuzviita chaizvo. Masystem apererwa nenguva, masystem haataure, misika inoshanduka, uye isu tinoda nzira dzekukurumidza kunyange kungoenderana Nekuda kweizvozvo, yakawanda yesimba redu inopedzwa kunze kwekukosha kwedu chaiko - creativity. Uye hunyanzvi hungave hwakaomesesa zvakanyanya kutsiviwa nerobhoti. Izvo zvakati ... mabasa atinopedzera yakawanda yenguva yedu paari anogona kutsiviwa nekukurumidza kupfuura iwe zvaunofunga.
Kufambira mberi kwetekinoroji kunonakidza kune vashambadziri nekuti vanozobvisa zvakajairika, zvinodzokororwa, uye mabasa ekuongorora uye zvinoita kuti titarise zvakanyanya kuedza kwedu uko tarenda redu riri chaizvo - creativity.
Machine Kudzidza - neakawanda uye akawedzera data akabatanidzwa anodyisa data yemusika, data rekukwikwidza, uye data revatengi, vimbiso yekudzidza kwemuchina ndeyekuti masisitimu anogona kuratidza, kuita, uye kunyangwe kukwidziridza bvunzo dzakasiyana. Funga nezve inguva yakadii yauchazodzoka kana iwe usingafanire kukwiza uye kubvunza dhata kakawanda.
chakagadzirwa Intelligence - nepo kusasarudzika kungave kuri makumi emakore mashoma, huchenjeri hwekunyepedzera kufambira mberi kunonakidza munzvimbo yekutengesa. AI ichiri kuda risingaperi huwandu hwedata kuti usvike pamatanho ekugadzira emunhu nhasi, saka zviri kusahadzika maneja anozotsiviwa chero nguva munguva pfupi.
Izvo hazvireve kuti AI haizombofa yakadzokorora kugona, zvakadaro. Fungidzira system inoongorora kudzvanya-kuburikidza dhata pane shambadziro - wozoongorora yemakwikwi kushambadza. Zvichida AI inogona dzidza maitiro ekugadzira misiyano inonzwisisika mumusoro wako uye zvinoonekwa kuti uwedzere kudzvanya-kuburikidza uye shanduko. Hatisi makore kubva ipapo - aya masisitimu ari pano.
Kugadzira kwevanhu kuri nyore kuteedzerwa, asi zvichave zvakaoma kudzokorora. Handina chivimbo chakakura chekuti ndichaona robhoti ichikura seyakagadzira mushandirapamwe sezvakaitwa naLeisurejobs neiyi infographic chero nguva munguva pfupi. Asi ndine chokwadi mumakore mashoma kuti ichazokwanisa kudzidza kubva pazviri uye kuteedzera!
47% yevashandi vevanhu ichatsiviwa nemarobhoti na2035, ndeupi mukana wekuti uchatsiviwa?
Basa Rako Rinonyangarika Here?
Tags: 2035aichakagadzirwa njereminyanyamachine learningkusimuka kwemarobhotirobhoti kushambadzirarobhoti kutsiva
Maitiro Ekumisikidza Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM)